पार्टी सदस्य ठगेर करोडपति बनेका सांसद कार्कीको यस्तो छ करोडपति हुनुको वास्तविक रहस्य ! « Bagmati Aawaj
मंसिर १३, २०७७ शनिबार (Saturday 28th November 2020)
पार्टी सदस्य ठगेर करोडपति बनेका सांसद कार्कीको यस्तो छ करोडपति हुनुको वास्तविक रहस्य !
काठमाडौं :कुसुम कार्की काठमाडौं ४ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। गएको चुनावमा गगन थापासँग मिलेर राजन भट्टराईलाई हराएको आरोप कार्कीलाई लागेको थियो । सांसद कार्की करोडपति हुनुको बास्तविक रहस्य बागमती आवाजलाई पार्टी निकट श्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।
यस्तो छ सांसद कार्कीको राजनीतिक र आर्थिक उपार्जनको बास्तविकता :
२०४९ को स्थानीय चुनावमा त्यतिखेरको महांकाल गाबिसबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित कुसुम कार्कीको आर्थिक अवस्था सामान्य थियो। २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा महाँकाल गाबिसमै अध्यक्ष बनेका कार्कीले अध्यक्ष बनेको १ वर्षपछिदेखि ब्यापार व्यावसायमा हात हाले।
श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कार्कीले त्यो बेला गाबिस अध्यक्षको पावर दुरुपयोग गरेर अनेकौँ व्यवासाय गरे। उनले गरेका ब्यावसायहरुमा ह्युम पाइप उधोग र सहकारी नै हुन्। त्यो बेला कार्कीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर काठमाडौंका सबै गाबिसहरुमा आफ्नो कम्पनीको पाईप बेचे। त्यो बाट धेरै नाफा कमाएपछि उनले सहकारी क्षेत्रमा हात हाले।
अध्यक्ष भएपछि नरम बोलेर जनतालाई लठ्ठ पार्ने कार्कीको ध्यान जनताको सेवा गर्न भन्दा पैसा कमाउन मै गयो। पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले आफ्नै पार्टीका २०० जति सदस्य जम्मा पारी कार्कीले २०५६/०५७ सालतिर नुवाकोटको बटारमा ४ लाख रोपनीका दरले ४ रोपनी जग्गा किनेका थिए। किनेको ४ वर्ष नबित्दै त्यहि जग्गाको मूल्य ४ लाख आना बनाए। होटल बनाउने जग्गाबाटै करोडौँ नाफा गरेका कार्कीले त्यसपछि नुवाकोटमा होटल वाटर टावर बनाउन भन्दै आफ्नै अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय निर्माण समिति बनाएर त्यसबाट पनि करोडौ घोटाला गरेको बुझिएको छ।
कार्कीले शुरुमा एकजना सहकारी सदस्यबाट १ लाख उठाएर जग्गा किनेका थिए। भवन बनाउनुपर्ने भएपछि बढाउँदै लगेर एक सदस्य १० लाख सम्म उठाउन सफल भएका थिए। आफ्नै पार्टीमा आस्थावान सदस्यहरुलाई प्रलोभनमा पारेर करोडौँ उठाउन सफल भए।
प्रलोभनमा नपरेका साथीहरुलाई घुमाएर, भोज ख्वाएर, पाटी गराउदै ५० हजार खर्च गरेर १० लाख उठाउन समेत सफल भए। राजनीति गर्दा सामान्य जीवन बिताउने कार्कीले पार्टीको खोल ओडेर आफ्नै सदस्यहरुलाई ठग्न सफल भई बिलासी घर र गाडीमा हिड्ने गरेको समेत बुझिएको छ।
पार्टी सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा सिन्को समेत नभाँच्ने कार्कीले चुनावमा उठेका ठूला नेताहरुलाई लाखौँ खर्च गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको समेत श्रोतले बताएको छ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक दुई पक्षबीच चर्काचर्की भएपछि प्रधानमन्त्री केपी
Copyright ©2020 Bagmati AawajAll Rights Reserved